7 sano kadib oo ciidamada Itoobiya xalay ay ka baxay Degmada Luuq….
Habeenkii xalay ahaa saqdii dhexe ayaa ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa Magaalada Luuq ee Gobolka Gedo halkaasi isaga baxeen kadib markii ay mudo 7 sano ah ku sugnaayeen halkaasi.
Ciidamad Itoobiya eek u sugnaa Degamada Luuq ayaa waxay ku biireen ciidamo kale oo Itoobiyaan ah oo ka tagay Magaalada Baydhabo, waxaana la sheegay in ay gaareen Doolow Soomaaliya oo ay uga sii gudbi doonaan dhinaca wadanka Itoobiya.
Muddadii todobada sano ahayd eek u sugnaayeen Luuq ayaa waxaa la sheegay in ay halkaasi ka sameeyeen maamul iyaga taageersan, sidoo kale waxaa lagu waramay in ciidamada Itoobiya halkaasi ka gaystay falal isugu jira dil, xarig iyo dhac, dadweynuhu waxay ahaayeen kuwo ku noolaa cabsi iyo walwal.
Dadweyne daad u fara badan ayaa isugu soo baxay magaalada Luuq kuwaas oo ku faraxsanaa bixitaanka ciidamada Itoobiya, waxaana la sheegay in ciidamo ka tirsan Ururka Al-Shabaab ay ku sii jeedaan magaaladaasi si ay ula wareegaan.
Gobolada Bay, Bakool iyo Gedo waxaa haatan ku sugan ciidamo ka tisan Ururka Al-Shabaab kuwaas oo la filayo in ay dhawaan ka sameeyaan maamul Islaami ah.
Ciidamada Itoobiya ayaa waxay degmada Luuq soo galeen 2002-dii kadib markii ay halkaasi ka dareemeen wax ay ku sheegeen in ay ku soo badanayaan kooxo islaami ah, waxayna ciidamadaasi ay ahaayeen kuwo ay si aad ah uga cabanayeen bulshada halkaasi ku nool iyadoo bixintaanka ciidamada Itoobiya ee degamada Luuq ka dhigeyso in ciidamada Itoobiya ay gebi ahaanba ka baxeen Soomaaliya.